Prague: miakatra be ny vidin'ny hotely amin'ny alin'ny Taom-baovao, hoy ny fanadihadiana
Home » Vaovao momba ny indostrian'ny fandraisam-bahiny » Prague: miakatra be ny vidin'ny hotely amin'ny alin'ny Taom-baovao, hoy ny fanadihadiana
I Prague dia iray amin'ireo toerana lafo indrindra any Eropa amin'ny fijanonana mandritra ny alina amin'ny alin'ny taona vaovao, hoy ny fanadihadiana nataon'ny tranonkala frantsay. Allovoyages.fr.
Ny fanadihadiana dia nampitaha ny vidin'ny trano hipetrahana manerana ny toerana eropeana 40 malaza ho an'ny alin'ny 31 desambra 2017. Ireo hotely miorina afovoany ihany no nahazo kintana telo farafahakeliny.
Any Prague dia mila mandany € 274 Euros ho an'ny efitrano roa sosona mora vidy indrindra ny mpibirioka amin'ny alin'ny Taom-baovao. Raha ampitahaina amin'ny salan'isa ao amin'ny renivohitra Czech, dia fiakarana efa ho 700% - ny fiakarana tahan'ny lehibe indrindra amin'ireo toeran-tany 40 nanontaniana.
Toerana roa monja no avoaka Pricier noho Prague: Amsterdam ary Edinburgh, izay misy ny efitrano roa sosona mora vidy indrindra dia handoa anao € 314 sy € 293 Euros avy.
Ity tabilao manaraka ity dia mampiseho ny toerana 10 lafo indrindra any Eropa amin'ny alin'ny Taom-baovao 2017.
Ny tarehimarika voalaza dia maneho ny vidin'ny efitrano roa sosona mora indrindra isaky ny toerana haleha amin'ny 31 Desambra. Ny fampitahana amin'ny taha mahazatra dia hita ao anaty fononteny, miorina amin'ny salan'isa antonony mandritra ny volana Janoary.
The valiny feno amin'ny fanadihadiana no misy eto.
Vahiny ao amin'ny Hotely Four Seasons naratra noho ny vaky varavarana fandroana fitaratra
Carly Rae Jepsen hanao fampisehoana amin'ny sambo Carnival Splendor amin'ny volana febroary 2018